19 Vhura Source Source Ecommerce Mapuratifomu
Vhura-sosi ecommerce mapuratifomu anopa mabhizinesi sarudzo inogadziriswa yekutangisa chitoro chepamhepo, nenharaunda dzinoshanda dzinotsigira, sei-kune zviwanikwa, uye madhairekitori evatambi vechitatu-bato.
Heino runyorwa rweyakavhurika-sosi ecommerce mapuratifomu. Kune matsva uye akasimbiswa mapuratifomu ane epamberi epakati maficha, akajairika madingindira, uye maraibhurari ekuwedzera. Zvizhinji zvezvishandiso izvi zvakare zvakagamuchira shanduro dzemabhizinesi.
Vhura Source Source Ecommerce Mapuratifomu
WooCommerce inochinjika, yakavhurika-sosi yekutengesa chikuva yakavakirwa pane iyo WordPress zvemukati manejimendi manejimendi. WooCommerce inouya yakasunganidzwa nekwanisi yekugamuchira makadhi echikwereti makuru, kuendeswa kubhangi, macheki, uye mari pakununurwa, iine 140 matunhu-akasarudzika masuo. Tengesa zvigadzirwa zvakareruka zvemuviri, kugadzwa, uye nhengo-chete zvemadhijitari zvemukati. WooCommerce inopa otomatiki kuverenga mutero, mhenyu kutumira mitero kubva kune vanotungamira vatakuri, sarudzo dzekudhinda zvinyorwa, nharembozha maapplication eIOS uye Android, uye nezvimwe. WooCommerce inonyanya kugadziriswa nepamusoro Mazana matanhatu ekuwedzera uye akawanda plugins. Inoshanda inotsigira nharaunda inoronga kusangana-kumusoro.
Drupal Commerce seti yemamojuru akavakirwa pane iyo Drupal CMS, ichipa yakazara ecommerce mhinduro kune anopfuura zviuru makumi mashanu zvitoro zveese saizi. Inobatanidza zvirimo uye zvigadzirwa musina kutyaira kutengesa pamhepo kuburikidza nehupfumi mushandisi ruzivo, optimized kushambadzira, uye yekutsvaga injini yekushandisa maturusi. Drupal Commerce inosangana neanopfuura 250 echitatu-bato maapplication uye masevhisi. Inopawo akasiyana madingindira uye akafanorongedzerwa masisitimu. Nyore sanganisa Drupal Commerce nemahombekombe masocial network senge Facebook, Twitter, Pinterest, uye zvimwe.
Magento Open Source (yaimbova Magento Community Edition) ndeye yemahara vhezheni yeMagento ecommerce chikuva, iyo inosanganisira iyo yekutanga Magento Commerce, inoitirwa bhizinesi vhezheni ine yakawedzera maficha. Pinda paMagento Marketplace kuti ugadzirire chitoro chako pamwe neanosvika zviuru mazana mana ekuwedzeredzwa uye nemhando dzakasiyana dzemisoro, vanobatirana, sarudzo dzekutsigira, uye zviwanikwa. Magento inopawo ecommerce kudzidzisa makosi uye chirongwa chechitupa.
Prestashop inzvimbo inozivikanwa yeecommerce muEurope neLatin America, iine nzvimbo dzinopfuura mazana matatu emazana ecommerce pasirese. Zvichienderana nesimba rine simba reSymfony, PrestaShop inosanganisira zvinopfuura mazana matanhatu maficha ekugadzirisa katarogu yechigadzirwa, chitoro chepamhepo, setup yakawanda-shopu, nezvimwe. Kupfuura 300,000 PrestaShop yekuwedzera-pane ma module anogona kugadzirisa chitoro, kuwedzera traffic, kugadzirisa mitengo yekutendeuka, uye kuvaka kuvimbika kwevatengi.
Mailchimp Vhura Commerce (yaimbova Reaction Commerce) ndeye API-yekutanga, modular commerce stack yakavakwa uchishandisa Node.js, React, uye GraphQL. Chitoro chega chega chakavakwa chakatenderedza katarogu yezvigadzirwa. Gadzira zvigadzirwa zvako mu admin dashibhodhi uye wozvirongedza nemategi kubatsira vatengi kufamba munzira yacho. Mhando dzakasiyana dzemapulagini dzinofukidza epuratifomu maficha, kusanganisira backend services, shopu kumisikidza, uye shopper ruzivo.
Mailchimp Vhura Commerce
Mutengesi chikuva chisina musoro chemabhizimusi epakati nepakati. Yakanyorwa padanho reDjango, ichishandisa Python uye GraphQL, Saleor inowanikwa seyese chitoro chepamhepo uye webhusaiti inofambira mberi, saka vatengi vanogona kushopira chitoro chako kunyangwe ivo vari kunze kwenyika. Vaka chero kumberi-kumagumo kunoshanda kune rako bhizinesi mune tekinoroji yaunosarudza. Tengesa zvigadzirwa zvakareruka uye zvinogadziriswa zvine akawanda akasiyana. Bata zvigadzirwa zvemadhijitari uye zvepanyama. Dhizaini yedhizaini raSareor inowanikwa mumitauro makumi matatu-yekuwedzera. Gadzirisa zvirinyore chitoro chako kubva kune mbozhanhare.
Spree Kutengesa yakavhurika-sosi ecommerce papuratifomu, yakavakwa naRuby paRails, yemitauro yakawanda uye yakawanda-mari yepasi rose. Spree Commerce inowanikwa mahara newebhu chitoro, inofambira mberi webhu webhu, kana isina musoro. Iyo inoratidzira inoteerera pamberi pechitoro, yakawanda-chitoro chemazhinji mabrand, epamberi ekudzora system, anopfuura makumi matatu akabatanidzwa kubhadhara, uye akawanda emawedzero. Spree Kutengesa ine vanopfuura vanopfuura mazana manomwe nemakumi masere vanopa, 780 GitHub nyeredzi, uye 10,100 miriyoni kurodha pasi.
OpenCart inogona kubata akawanda online zvitoro kubva kune imwechete kumashure-kumagumo. OpenCart inouya nenhare inoshamwaridzika admin, izere neyakajeka chigadzirwa, kurongeka, uye manejimendi manejimendi, pamwe nemishumo yekutengesa, zvishandiso zvekushambadzira, nezvimwe. OpenCart inopawo pamusoro pe13,000 ma module uye madingindira. OpenCart maforamu ane anopfuura mazana gumi nemazana gumi nenhengo dzakanyoreswa uye zvinopfuura mazana mashanu nemakumi mashanu ezvinyorwa.
osCommerce ipuratifomu yakavhurika-sosi, yakavhurwa muna 2000. Yayo Online Merchant edition ndeye yakazara chitoro sisitimu ine ese kumberi-kumagumo uye yekudzorera backend iyo inogona kugadziriswa nyore nyore uye inogadziriswa uchishandisa 9,100 yemahara ekuwedzera. Dzinosvika 21,000 nzvimbo dzekugara shandisa osCommerce. Yayo forum ine 1.6 mamirioni maposta.
Odoo inofambidzana yeakavhurika, akavhurika-sosi bhizinesi maapplication, kusanganisira ecommerce, poindi-yekutengesa, accounting, inventory, uye mutengi uye chirongwa manejimendi. Odoo's ecommerce app inoratidzira mapeji anogadziriswa uye madingindira, mubhadharo wakasanganiswa uye sarudzo dzekutakura, nezvimwe. Dhizaini, tumira, uye uteedzere inoshanda mushandirapamwe weemail. Mhanya uye usimudzire blog. Gadzira yakabwinyiswa yekutengesa zvirevo.
Pimcore inopa zvinofambiswa neAPI-API kugadzira yakakwira-inoita B2C uye B2B ecommerce saiti. Pimcore's isina musoro bhizimusi dhizaini inogona kubata mitengo yakaoma uye zvigadzirwa zvigadzirwa, dhizaini yega uye chekiji, kumberi-kumagumo maapplication, uye kusimudzira kushambadzira, pamwe neakawanda makatalogu, mari, rondedzero yemitengo, uye zvigadzirwa zvinoonekwa. Pimcore inowanikwa seyemahara, yakavhurika-sosi Yemunharaunda Edhisheni kana Bhizinesi Kunyorera.
nopCommerce yakavhurika-sosi ecommerce mhinduro yakanangana ne Microsoft's ASP.NET fomati. nopCommerce zvinhu zvigadzirwa zvisingagumi uye maakaundi, nzira dzakakurumbira dzekubhadhara, zvemberi zvekutumira maficha, akawanda-mutengesi uye akawanda-ezvitoro mashandiro, epamberi bhizinesi kuburitsa uye analytics, akavakirwa-mukati ekushambadzira maturusi, scalability, uye EU yakavanzika rutsigiro. nopCommerce ine 1,500-yekuwedzera kusanganiswa uye inosvika mazana mazana maviri nemakumi mashanu enharaunda.
Ecwid yakavambwa muna2009 kugonesa mabhizinesi madiki ekuwedzera zvitoro zvepamhepo kune avo aripo masaiti zvirinyore. Iri zita rinotorwa kubva ku "ecommerce widget," ichisimbisa kugona kwayo kugadzirisa mawebhusaiti aripo mumaminetsi. Wedzera chitoro chako kune akawanda masayiti, mablog uye masocial network uye gadzirisa zvese kubva kunzvimbo imwechete. Shanduko dzinooneswa ipapo ipapo pamasaiti ese. Zvirongwa zvePremium rega iwe utengese paFacebook, Instagram, uye Amazon.
Sylius yakavhurika-sosi headless ecommerce chikuva chepakati-musika uye emabhizimusi maronda. Yayo yekutanga beta kuburitswa yaive muna 2016. Sylius ikozvino inopa yekutengesa edition, zvakare, inonzi Sylius Plus. Sylius inoratidzira inochinjika sisitimu yekuyambuka muganho commerce, yakawanda mari, nyore kugadzirisa uye kusangana, kunze-kwe-kwe-bhokisi kukwidziridzwa, iri nyore inochinjika manejimendi manejimendi, uye scalable zvivakwa. Sylius inotsigirwa nevabatsiri vanosvika mazana matanhatu nemakumi maviri uye inopa anodarika mazana maviri emapulagi.
VirtueMart yakavhurika-sosi ecommerce chikuva chekushandisa neJoomla zvemukati manejimendi system. Iyo inogona kumhanyisa senge yekutengera ngoro kana mu catalog modhi. Chinja kutaridzika uye kunzwa kwewebsite yako uchishandisa Joomla matemplate. Tsvaga akasiyana ezvekutengesa maficha, anosanganisira maturusi ekugadzirisa vatengi, kudzora stock, kuwedzera kutsva ratings, kupa kutumira uye kubhadharisa sarudzo, nezvimwe. Iyo VirtueMart eCommerce Bundle ishanduko yeJoomla neVirtueMart yakatotanga kuiswa.
Joomla ndeye yemahara uye yakavhurika-sosi CMS iyo inogona kushandiswa kune ecommerce, online kuchengetedza, mawebhusaiti emabhizinesi madiki, uye nezvimwe. Sisitimu yayo yepakati inopa yekudzoreredza masystem, maturusi ekuzivisa data, uye echinyakare chigadzirwa katalog, pakati pezvimwe zvinhu. Musika waJoomla une zvinoda kusvika zviuru zvitanhatu zvekuwedzeredzwa. Joomla yakatanga muna 6,000 uye ine mazana mazana maviri.
OroCommerce iB2B ecommerce chikuva. Gadzira wega-webhusaiti ecommerce webhusaiti, mutengi portal, kana yakazara portal. Iyo Nharaunda Edhisheni ine multichannel yevatengi portal, akawanda ezvitoro zvinyorwa, inesimba mitengo yemitengo, yekushandisa manejimendi, maficha ekushambadzira, uye zvimwe.
Zen yekutengera iri yemahara, yakavhurika-sosi app, yakabatanidzwa kubva osCommerce muna 2003. Zen Cart iri PHP-yakavakirwa, ine MySQL dhatabhesi uye HTML zvikamu. Iyo ine pamusoro pe2,000 yekuwedzera-ons muzvikamu gumi neshanu, ine nharaunda yeanosvika makumi matatu evanogadzira vanoshanda uye neinoshanda inoshanda forum
Zvitoro rakaumbwa muna 2000 muGermany. Shopware 6 inogoneswa neSymfony uye Vue.js. (Yakamutangira, Shopware 5, ine pamusoro pe800,000 kurodha pasi.) Shopware 6 yakavakirwa paTwig neBootstrap. Pamusoro peiyo yemahara inozvitambira YekwaMagazini Edhisheni, Shopware zvakare inopa Starter, Nyanzvi, uye Enterprise editions, pamwe nekugovana mari pakati pe0.5% ne3%.
Maitiro ekusetesa Magento 2 Ine Varnish uye Apache pane Ubuntu 16.04
Yepamusoro 10 Shopify Alternatives ye eCommerce Websites
Iyo Yakanakisisa Ecoommerce Webhusaiti Kuvaka
Yekupedzisira Rondedzero yeEcommerce Zvishandiso Zve2020
Maitiro ekuisa Magento neNginx paDebian 10